Forex ရိုဘော့ဆိုတာဘာလဲနှင့် ၎င်းအား အသုံးပြုပုံ
Forex ရိုဘော့ဆိုတာ တကယ်တမ်းကဘာလဲ?
မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ သင့်လက်တော့ရှေ့မှာ တာမီနေတာတွေ ထိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Forex ရိုဘော့သည် အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာအတွက် အထူးရေးသားထားသည့် ပရိုဂရမ်တစ်ခု၊ ကုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရောင်းဝယ်သူမှ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်နေစဉ်အတွင်း အရောင်းအဝယ်များအတွင်း ဝင်ရောက်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်ပြချက်များကို သုံးထားပါသည်။ သီးသန့်အညွှန်းကိန်းများနှင့် ကနဦးဆက်တင်ပေါ် မူတည်ပြီး၊ ဤပရိုဂရမ်သည် ရောင်းဝယ်သူအား ဈေးကွက်တွင် လုပ်ဆောင်ရန်ကူညီပေးခြင်း (သို့) အလိုအလျောက် အပြည့်အဝရောင်းဝယ်ခြင်းများ လုပ်နိုင်သည်။
အလိုအလျောက် ရောင်းဝယ်တယ်? သင်ဘာမှ လုပ်စရာမလိုသလိုလား?
အမှန်တော့၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ရော၊ အပြည့်အဝ အလိုအလျောက်ရောင်းဝယ်ခြင်းအတွက်ရော ရိုဘော့ကိုသုံးနိုင်ပါသည်။ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုစလုံးတွင် ကောင်းကျိုးများရှိကြပါသည်။ ပါးနပ်သောရိုဘော့များသည် ဈေးကွက်ပုံစံများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အလှည့်အပြောင်းများကို သုံးသပ်ခြင်း၊ အချက်ပြချက်များနှင့် သီးသန့်အညွှန်းကိန်းများဖတ်ခြင်း - ရောင်းဝယ်သူအချို့သည် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးအား ကွန်ပျူတာကုဒ်အပေါ် နှစ်သက်ရာဆက်တင်ချိန်ထားပြီး ပုံအပ်ထားကြသည်။ ရောင်းဝယ်သူအချို့ကတော့ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်နေသေးရန် လိုလားပြီး၊ ရိုဘော့နှင့် ဈေးကွက်လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာ စိတ်ချထားသည်။ ရိုဘော့သည် ပါးနပ်သော်လည်း ကုဒ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည့်အလျှောက်၊ ရောင်းဝယ်သူအချို့သည် ၎င်းအား ကြီးကြပ်နေလိုစိတ်ရှိကြသည်။
ကောင်းပြီ၊ ရိုဘော့များသုံးရခြင်းရဲ့ အားသာချက်က ဘာတွေလဲ?
Forex ရိုဘော့အသုံးပြုခြင်း၏ သိသာသောအကျိုးကျေးဇူးမှာ ရောင်းဝယ်သူအနေဖြင့် ရရှိလာသည့် "လွတ်လပ်သော"အချိန်ပမာဏဖြစ်သည်။ ရိုဘောသည့် ဈေးကွက်အား သုံးသပ်ပြီး၊ အော်ဒါများ ၂၄နာရီဖွင့်ပေးသည်။ ရိုဘော့သည် အော်ဒါများအား မယုံနိုင်စရာ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဖွင့်ခြင်း (သို့) ပိတ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်အတွက် အချက်ပြချက်များကို စနစ်တကျလုပ်ဆောင်သည်။ အရေးပါသည်မှာ ရိုဘော့ကောင်းများတွင် သူတို့၏ ကနဦးကုဒ်တွင် ထည့်သွင်းထားသည့် အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုရှိခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ရိုဘော့နှင့်ရောင်းဝယ်သောအခါ၊ စိတ်ခံစားချက်ကြောင့် ဖြစ်လာသည့် အရင်းအနှီးဆုံးရှုံးမှုများမှ ပိုပြီးကာကွယ်နိုင်သည်။ ရိုဘော့များ၏ အကျိုးကျေးဇူးကြီးမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားများကို လျှော့ချရန်ကူညီပေးသည်: ရောင်းဝယ်သူမှ ဇယားအတက်အကျကို ကြည့်တာမဟုတ်တော့ဘဲ၊ စက်ကသာ ကြည့်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါဆို ရိုဘောက အမြဲမှန်တာလား? အားနည်းချက်တွေက ဘာတွေလဲ?
ရိုဘော့များသည် သီးသန့်စည်းမျဉ်းများဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။ သူတို့ကိုယ်ပိုင် ဆက်တင်များနှင့် သူတို့အား ရေးသားထားသည့် အညွှန်းကိန်းများအရ သူတို့သည် အမြဲမှန်သည်။ သို့သော် သူတို့သည် ဈေးကွက်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အနေအထားများ လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်းအား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မချိန်ဆနိုင်ပါ။ ရိုဘော့များသည် ထက်မြက်သည် သို့သော် သူတို့သည် ပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီး၊ အချိန်နဲ့အမျှ ဗားရှင်းမြှင့်နေရန်လိုသည့် ပရိုဂရမ်များသာဖြစ်သည်။ ရိုဘော့၏ ကနဦးဆက်တင်များ၏ ဘောင်ကို ကျော်လွန်ပြီး ဈေးကွက်ပြောင်းလဲသည့်အခါတိုင်း၊ ရောင်းဝယ်သူမှ ပရိုဂရမ်အား ပြင်ဆင်ရန်နှင့်၊ တစ်ခါတစ်ရံ ပြန်ရေးခြင်း (သို့) ကနဦးကုဒ်ထံ ထပ်ပေါင်းခြင်းများလုပ်ရန် လိုပါသည်။ ဈေးကွက်အနေအထားကိုလိုက်၍ ရိုဘော့များကို ဗားရှင်းမြှင့်ရန်လိုသည့်အချက်သည် အချို့သောသူများအတွက် အားနည်းချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ရိုဘော့တွေကို ကြည့်ရတာ အသုံးဝင်ပုံပဲ၊ ဒါပေမယ့် ၎င်းတို့က အရမ်းကွဲပြားပါတယ်!
မှန်ပါသည်။ အခြားဆော့ဖ်ဝဲများကဲ့သို့ ရိုဘော့များရောင်းဝယ်ခြင်းသည် မတူညီသည့်ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ ရိုဘော့ဝယ်သည့်အခါ လက်စွဲ (သို့) ၎င်းအားတပ်ဆင်ရန် အခြားညွှန်ကြားချက်များရသည် သေချာပါစေ - သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းသည် ကုဒ်ကြိုးအများအပြားကလွဲပြီး၊ ဘာမှအသုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ ရိုဘော့အတွက် လက်စွဲနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဆက်တင်ရှိထားလေ၊ ပိုကောင်းလေဖြစ်သည် - အတွင်းပိုင်းကို သေချာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပြီး၊ သင့်ရည်ရွယ်အချက်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များလုပ်ရန် အခွင့်အရေးရှိမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ထို့ထက်ပိုသွားလိုပါက၊ သင့်ကိုယ်ပိုင် ရိုဘော့ရေးနိုင်သည်: ထို့နောက် ၎င်းအား ပြည့်စုံစွာ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီး၊ သင့်အရောင်းအဝယ် ရည်မှန်းချက်အတွက် ပြည့်စုံနိုင်သမျှ ပြည့်စုံအောင် လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သိပါပြီ၊ ဒါဆို ရိုဘော့ကောင်းတစ်ခုကို ဘယ်လိုရွေးမလဲ?
မှန်ကန်သည့် အရောင်းအဝယ်ရိုဘော့ရွေးချယ်ရန်၊ အလုပ်လုပ်နေသည့်ဗျူဟာပေါ် ဦးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး၊ မှတ်သားထားရန်လိုသည်။ လျင်မြန်ပြီး ကြီးမားသည့်အမြတ် ရာခိုင်နှုန်းများ၏ လှည့်စားခြင်းမခံပါနှင့် - ၎င်းသည် ရိုဘော့၏ အလိုရမ္မက်ကြီးသော ဆက်တင်၏ ရလဒ်မျိုးဖြစ်သွားစေပြီး၊ အနာဂတ်တွင် သင့်အရင်းအနှီးကို မလုံခြုံမှု ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်ယုံကြည်ရသည့် အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာကို လိုက်နာပါ၊ တနည်းဆိုရသော် ရိုဘော့တစ်ခုသည် သင့်ကိုအလွယ်တကူ နှိမ့်ချနိုင်သည်။ "တစ်ခု" ကိုရွေးချယ်သည့်အပေါ် မတူညီသည့် အကြံပေးချက်ရှိပေမယ့်၊ မှတ်ထားပါ - ရိုဘော့ မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်လုပ်နေလားဆိုတာကို မြင်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ၊ စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရိုဘော့အား အနည်းနှင့် အများသတ်မှတ်ပြီးပါက၊ ၎င်းအား စမ်းသပ်သင့်ပါသည်။ လူအတော်များများသည် သူတို့၏ ရိုဘော့များကို ဒီမိုအကောင့်များတွင် စမ်းသပ်ပေမယ့် ထိုကဲ့သို့မလုပ်ရန် ပြင်းထန်သည့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ ဒီမိုအကောင့်များသည် ရောင်းဝယ်သူများ၏ ပုခုံးပေါ်မှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားများကို ထမ်းပိုးထားပေးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ သင်သည် တကယ့်ပိုက်ဆံကို လည်ပတ်နေခြင်းမဟုတ်ဟု သိထားခြင်းသည် ပိုခက်ခဲသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဦးတည်စေသည်။ ရိုဘော့ကို သင်စမ်းသပ်နေပါက၊ တကယ့်ဈေးကွက် ဖိအား၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းရာကိုလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်သင့်သည်။ တကယ့်အကောင့်များတွင် စမ်းသပ်သင့်သည့် ဒုတိယအကြောင်းပြချက်မှာ ဒီမိုအကောင့်များတွင် ကြေးအဟကဲ့သို့သော အရာများမပါဝင်ဘဲ၊ လုပ်ဆောင်ချက်ပြဿနာများလည်း မရှိကာ၊ ဈေးကွက်ထောင်ချောက်များကို ရှောင်လွှဲရန် ရိုဘော့ကိုသင်ပေးရန် အပြစ်ဆိုဖွယ်ရာမရှိဖြစ်နေလွန်းသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ရိုဘော့အား စမ်းသပ်နေသောအခါ၊ သင်အသုံးပြုချင်သည့် တကယ့်အကောင့်အမျိုးအစားနှင့်သာ စတင်ပါ။
ရိုဘော့တွေနဲ့ ရောင်းဝယ်ခြင်းအတွက် ဘယ်အကောင့်အမျိုးအစားက အသင့်လျှော်ဆုံးလဲ?
ရိုဘော့များကို မည်သည့်အကောင့်အမျိုးအစားတွင်မဆို သုံးနိုင်သည်။ လူအချို့သည် တူညီသည့်ပုံစံရှိသည့် အော်ဒါများ အနည်းနှင့် အများ၏ သေးငယ်သည့် များစွာသောပမာဏကို လုပ်ဆောင်ရန် ရိုဘော့များကို မိုက်ခရိုနှင့် ဆင့်အကောင့်များတွင် တပ်ဆင်ရန်ပိုအားသာကြသည်။ အချို့သူများသည် ရေရှည်အနေအထားများအတွက် - [စံ] (သို့) ECN အကောင့် ကို သုံးကြသည်။ အကောင့်ရွေးချယ်မှုသည် - သင့်ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အစီအစဉ်များနှင့် သင်အသုံးပြုချင်သည့် အလိုအလျောက်ပမာဏအရ သင့်အပေါ်မူတည်သည်။
အမှတ်ရပါ၊ ရိုဘော့များသည် သင့်ကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ချမ်းသာစေမည့် မှော်ဆန်သည့် တုပထားသောဥာဏ်ရည်အမျိုးအစားတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ပုံသေရိုဘော့များသည် အလွန်လွယ်ကူပြီး၊ သင့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သင်လိုအပ်သည့် အထူးအချက်ပြချက်များနှင့် သင့်စိတ်ကြိုက်မစီမံမချင်း ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ မမှန်တတ်ကြပါဘူး။ ထို့ကြောင့် စက်အား သင့်အတွက်ရောင်းဝယ်ရန် နည်းပညာပိုင်းအရ ပထမဆုံးသင်ကြားပေးရန် လုံလောက်သည့်အရောင်းအဝယ် အတွေ့အကြုံရှိထားတာ ပိုကောင်းပါသည်။